Isikhephe esinokuntywila sitshona kufutshane neCanary Islands, ngabantu abangama-52
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Isikhephe esinokuntywila sitshona kufutshane neCanary Islands, ngabantu abangama-52
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • iindaba • Safety • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Mnye kuphela umntu osindileyo kwintlekele yesikhephe e-inflatable e-Afrika kufutshane neziqithi zaseSpain.
Iphenyane lokufuduka ligudla iziqithi zeCanary.
OweSole usinde ngenqwelo moya ngenqwelo moya esibhedlele.
Abantu abangaphezu kwama-50 boyika ukufa.
Ngokwe-Maritime Rescue Service yaseSpain, abantu abangaphezu kwama-50 boyikwa ukuba basweleke emva kokuba isikhephe esingena ngogesi esivela e-Afrika sibetheka kuLwandlekazi lweAtlantic malunga neekhilomitha ezili-135 ukusuka kwiiSpanish Canary Islands.
Umfazi oneminyaka engama-30 kuphela osindileyo owasindiswa ngoLwesine kwisikhephe esitshonayo, esishiye iAfrika kwiveki ephelileyo bephethe abafuduki kunye neembacu ezingama-53.
Inqanawa yomrhwebi yayisele ibonile inqanawa emazantsi e Canary Islands kwaye yazisa iinkonzo zongxamiseko zaseSpain.
Eli bhinqa lalinamathele kule nqanawa yokutshona kunye nendoda efileyo kunye nomfazi ofileyo ecaleni kwakhe, latsho igosa lenkonzo yohlangulo.
Uxelele abahlanguli ukuba isikhephe esinokungena ngaphakathi besisuka kunxweme lwaseNtshona Sahara kwaye abakhweli basuka e-Ivory Coast.
Eli bhinqa lahanjiswa ngenqwelomoya esibhedlele eLas Palmas, kwisiqithi saseGran Canaria.
Ukufa kwabantu abafudukayo kunye neembacu kuxhaphakile kwindawo yeAtlantic eyahlula i Unxweme oluseNtshona lweAfrika kunye neeCanary Islands zaseSpain kodwa ukwaphuka kwenqanawa kwindlela kunzima ukuyiqinisekisa, kwaye imizimba yamaxhoba ayifumaneki.
Ubuncinci abantu abangama-250 basweleke kwindlela eya kwiziqithi zaseSpain kwiinyanga ezintandathu zokuqala zika-2021, ngokwe-arhente yokufuduka yeZizwe eziManyeneyo.